Qaxootiga waddanka isku qarinaya oo la ildaran cudurada maskaxda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 16 maj 2017 kl 10.57
Alexander:"Waa in aad guriga ku xidhnaatid"
Qaxootiga lagu wareeystay ayaa sheegay in ay la ildaranyihiin hurdo l´aan. sawir: CHRISTINE OLSSON / TT
Baadhitaan laga sameeyay qaar ka mid ah qaxootiga diidmada helay ee waddanka isku qarinaya ayaa sheegay in ay la ildaranyihiin cudurada maskaxda.
Sababta ayaa ah xaalada ay ku suganyihiin. Raadiyaha Iswiidhan ayaa wareeystay 84 qaxooti oo waddanka sharci darro ku jooga. Kuwan ayaa ka cabanaya hurdo l´aan iyo fikiro ah in ay is dilaan.
-Dibada ma mari kartid, ma shaqeeyn kartid, caruurta ka ma soo qaadi kartid iskuulka, dukanka ma tegi kartid, waxba ma sameeyn kartid. Waa in aad guriga ka bixin. Waxaa laga yaaba in aan maanta ilbidhiqsi kaga baxsado booliska, birri na la i qabto. Ma seexan karo, wexeey saameeysay caafimaadkeeyga maskaxda, ayuu sheegay nin aan u bixinay Alexander.
Wuxuu diidmadi ugu dambeeysay ka helay heeyada socdaalka lix sanno ka hor. Islamarkiiba waxaan go´aansanay in aan waddanka isku qarino aniga iyo qoyskeeyga, ayuu Alexander sheegay.
Tirada ,sida Alexander, sharci darro ku jooga waddanka boolisku ma oga. Hasayeeshe ayuu boolisku laayahay 12 500 oo qaxooti oo hadda la filayo in ay waddanka isku qarinayaan. Sababta ayaa ah in la caddeyn karin in ay waddanka ka baxeen ka dib markii sharciga loo diiday.
84:ka qaxooti ee lagu wareeystay baadhitaanka Raadiyaha Iswiidhan ayaa ka yimid 20 waddan. 32 ka mid ah kuwan ayaa ah haween, inta kale niman.
Marka laga wareeystay sideey u arkaan caafimaadkooda maskaxadeed ayey 69 sheegeen in ay la ildaranyihiin cudurada maskaxda.
Gabadhan oo aan u bixinay Julia ayaa sheegtay in ay Iswiidhan sharci darro ku joogan iyada,hooyadeed iyo afarteeda walaal.
-Waxaan la ildaranahay cudurka Posttraumatiskt stressyndrom. Waa welwel iyo jahawareerta qofku dareemo marku soo maray dhacdooyin fool xun sida dagaalada ,dilka iyo dhaawaca. Todobaad walba waxaan la kulma dhakhtar. Laakin waxba iga ma caawinayso madama aan ogay waxa i sugaya marka la igu celiyo waddankii aan ka imid.
Anders Björkman waa ninkii asaasay ururka Läkare i Världens klinik för papperslösa i Stockholm. Waa goobta lagu daaweeyo dadka sharci darroda waddanka ku jooga.
Wuxuu sheegay in aanu la yaabsaneeyn in badanka qaxootigu la ildaranyihiin cuduruda maskaxda.
-Maya ma la yaabsani. Waxaan yaabi lahaa hadii aan la kulmo qaxooti aan ka cabaneeyn dhibaatooyinkan, ayuu sheegay Anders Björkman.